Ukukhumbula ukubulawa kweShanda Sharer
Bambalwa ubugqwetha kumaxesha anamhlanje babangela ukuxhalabisa koluntu ngaphezu kokuhlushwa kakubi nokubulawa kukaShanda Sharer oneminyaka eli-12 ubudala ezandleni zamantombazana amane asetsheni ngoJan 11, 1992 eMadison, e-Indiana. Ukunyaniseka kunye nobubi obubonakaliswe ngabantombazana abane abaselula, abaneminyaka engama-15 ukuya kwe-17, bamangalisa uluntu ke, kwaye luqhubeka luba ngumthombo wokuthakazelisa nokuguquka njengento eninzi yeencwadi, amaphephancwadi, iinkqubo zethelevishini kunye namaphepha eengqondo.
Iziganeko ezibangela ukuBulala
Ngethuba lokubulala kwakhe, uShanda Renee Sharer wayenentombi eneminyaka engama-12 ubudala yabazali abahlukanisile, eya esikolweni kwiNkathakazi yethu yesikolo samaKatolika esiNcedo soPhezulu eNew Albany, e-Indiana, emva kokudluliselwa kunyaka owedlule ukusuka eHazelwood Middle School. Ngexa e-Hazelwood, uShanda wadibana noAmanda Heavrin. Ekuqaleni la mabhinqa amabini alwa, kodwa ekugqibeleni waba ngabahlobo waza waba ngothando lomntwana.
Ngo-Oktobha ka-1991, u-Amanda noShanda babeya kumdaniso wesikolo kunye xa bexhatshazwa nguMelinda Loveless, intombazana endala u-Amanda Heavrin wayesebenzelana naye ukususela ngo-1990. NjengoShanda Sharer no-Amanda Heavrin baqhubeka behlala ngo-Oktobha, UMalinda ongenaluthando waqala ukuxoxa ngokubulala uShanda waza wambona esongela kuluntu. Kwakule ndawo, echaphazelekayo ngokukhuseleko kwentombi yabo, ukuba abazali bakaShanda bamdlulisele kwisikolo samaKatolika kunye no-Amanda.
Ukutshitshiswa, ukuhlushwa nokubulala
Nangona uShanda Sharer engekho kwisikolo esifanayo no-Amanda Heavrin, uMalinda Loveless 'umona waqhubeka nokunyuka kwiinyanga ezimbalwa ezizayo, kwaye ngobusuku bukaJan. 10, 1992, uMelinda, kunye nabahlobo abathathu-uToni Lawrence (uneminyaka eyi-15), uThemba Rippey (oneminyaka eli-15 ubudala) kunye noLaurie Tackett (oneminyaka eli-17 ubudala) -ya apho uShanda wayechitha khona ngeveki kunye noyise.
Emva nje kweentsuku zobusuku, amantombazana akhulileyo aqinisekisa uShanda ukuba umngane wakhe uAmanda Heavrin wayemlindele kwindawo ekhulile ye-hangout eyaziwa ngokuba yi-Witch Castle, ikhaya elityebileyo elisezindaweni ezikude ezibhekiselele kuMlambo wase-Ohio.
Ngesinye imoto, uMelinda Loveless waqala ukusongela uShanda ngommese, kwaye xa befikile kwiNqabeni yeWitch, ezo ntsongelo zaye zaba ziiyure zokubandezeleka. Kwakungekho iinkcukacha zobuqhophololo obulandeleleneyo, zonke eziphuma emva koko ngokufaka ubungqina kumnye wamantombazana, okwenkqisayo uluntu. Ngaphezulu kweeyure ezingaphezu kweesithandathu, uShanda Sharer wayephantsi kokubetha ngeengqungquthela, ukubetha ngentambo, ukubetha okuphindaphindiweyo, kunye nebhetri kunye ne-sodomy ne-iron tere. Ekugqibeleni, intombazana ephilileyo yayidalwa ngepetroliyo kwaye yatshisa iinyanga zokuqala zikaJan. 11, 1992, kwintsimi ecaleni kwendlela yesitrato.
Ngokukhawuleza emva kokubulawa, loo nto intombazana emine yayidla isidlo sakusihlwa eMcDonald's, apho kuxelwa ukuba bahleka ngokukhawuleza ukubukeka kwesosaji kweso sidumbu ababesishiyile.
Ukutyhila inyaniso yolu lwaphulo-mthetho ngokubonga akuzange kuthathe ixesha elide. Umzimba kaShanda Sharer wafunyanwa kamva ngaloo ntsasa ngabazingeli abahamba ngeendlela.
Xa abazali bakaShanda babika ukuthi ulahlekile ngemini yamva, ukuxhamla kumzimba ofumene ngokukhawuleza wabukrokra ngokukhawuleza. Ngaloo busuku, ukuphazamiseka kukaToni Lawrence kunye nabazali bakhe beza kwiofisi ye-Jeffrey County Sheriff kwaye baqala ukuvuma iinkcukacha zolwaphulo-mthetho. Iirekhodi zamazinyo zakhawuleza ziqinisekisile ukuba izidumbu ezifunyanwe ngabazingeli zazingabakwaShanda Sharer. Ngomso olandelayo, bonke abathintekayo amantombazana babanjwe.
Ngobungqina obunyanzelisayo obubonelelwe nguToni Lawrence, ubungqina bentombazana emine abandakanyekayo bonke babetyala njengabantu abadala. Ngomlinganiselo onamandla wokugweba izigwebo zokufa, bonke bavuma ukucela unetyala ukuze baphephe umphumo onjalo.
Ekulungiseleleni isigwebo, abameli bezokukhusela basebenzisa umgudu omkhulu wokudibanisa iingxabano zokunciphisa iimeko kwezinye iintombazana, bethetha ukuba ezi zinto zanciphise ukuthotywa kwabo.
Ezi ngxelo zanikwe kumgwebi ngexesha lokuvalelwa kwecala.
UMalinda ongenaluthando, umgcini-mlawuli, wayenomlando omkhulu kakhulu wokusetyenziswa kakubi. Kwintetho yezomthetho, odadewabo ababini kunye nabazala bakhe babonisa ukuba uyise, uLarry Loveless, wayebaphoqe ukuba balalane naye, nangona babengenako ukufakazela ukuba uMelinda naye wayexhatshazwe kakubi. Imbali yakhe yokuxhaphazwa ngokomzimba kumfazi kunye nabantwana yayibhalwe kakuhle, kunye neprogram yokuziphatha kakubi ngokwesondo. (Kamva, uLarry Loveless uza kuhlawulwa ngamanani angama-11 okusetyenziswa kakubi ngokwesini.)
ULaurie Tackett wakhuliswa kwikhaya elinobuxoki apho umculo womculo, amafilimu kunye neminye imiqobo yokuphila kwasebushumi ngokuqhelekileyo yayingavunyelwe. Ekuvukeleni, wayigcoba intloko kwaye wenza izinto zokusebenzelana nemimoya. Kwakungazange kumangalise gqitha abanye ukuba unokuthatha inxaxheba kulwaphulo-mthetho olunjalo.
UToni Lawrence noThemba uRippey babengenalo iindumiso ezixhalabileyo, kwaye iingcali kunye nababukeli bezentlalo baxakeke kakhulu ukuba amantombazana aqhelekileyo angaba nxaxheba njani kulwaphulo-mthetho olunjalo. Ekugqibeleni, kwaxutywa kukunyanzeliswa yontanga elula kunye nokoma ukwamkelwa, kodwa imeko iyaqhubeka ibe ngumthombo wohlalutyo kunye nengxoxo kulo mhla.
Ukutshintshiselwa ubungqina bakhe obuninzi, uToni Lawrence wathola isigwebo esincinane kunazo zonke-wacela inetyala kwinani elilodwa leCriminal Confinment waza wagwetywa iminyaka engama-20. Wakhishwa ngoDisemba 14, 2000, emva kokukhonza iminyaka elithoba. Wahlala e-parole kuze kube nguDisemba, 2002.
Ithemba likaRippey ugwetyelwe iminyaka engama-60, kunye neminyaka elishumi egxininiswe ngenxa yokunciphisa iimeko. Emva kwesikhalazo kamva, isigwebo sakhe sanciphisa sibe yiminyaka engama-35. Wakhishwa kwangethuba ngo-Apreli 28, 2002 evela e-Indiana Women's Prison emva kokukhonza iminyaka eyi-14 yesigwebo sakhe sokuqala.
UMelinda ongenaluthando noLaurie Tackett bagwetywa iminyaka engama-60 ejele lase-Indiana Women's Prison e-Indianapolis. I-Tacket yakhululwa ngomhla ka-Jan. 11, 2018, ngokuyiminyaka engama-26 ukuya kumhla emva kokubulala.
UMalinda ongenaluthando, umlawuli wecala lokubulala ngokugqithisileyo ngexesha langoku, kufuneka kukhutshwe ngo-2019.
Umbulali weChandra Levy
Izigwenxa ZaseFlorida Ukufa Kwetyala Ibanjwa Elimi Carr
U-Spencer Lofranco Uthetha Nge 'Jamesy Boy'
I-Titanosaurus Iinkcukacha kunye neenkcukacha
Uluhlu lweZikolo zoLuntu ze-Free Online kwi-Missouri Students, K-12
Xa Ulwaphulo Lwabafundi Bakho Lwasemakhaya
Umculi ongumKristu uRay Boltz Uphumayo, Uthi Uhlala Kwindawo Eqhelekileyo Yobomi
Isikhokelo se-Eco-Friendly Drain Cleaners
IiNkcazo zeNkcazo kunye neNgxoxo ye-Syntax yesiNgesi
UBill Maher Quotes
UMary Higgins Clark - Uninzi olukhutshwa ngokutsha
50 Eyaziwayo Kanji - Ryuu
Mayelana neGlosari yebhola - iPooch Kick